Xasuus Hore: 5-Ceeb Oo Banaanka Usoo Baxday Kadib Markii Dagaalka Hrithik Iyo Kangana Uu Meel Xun Gaaray! - Hablaha Media Network
Xasuus Hore: 5-Ceeb Oo Banaanka Usoo Baxday Kadib Markii Dagaalka Hrithik Iyo Kangana Uu Meel Xun Gaaray!
HMN:- Maadaama aan u aragnay inay tahay warbixin aad u xiiso badneyd, filimside.net ayaa go,aansatay inay dib u xasuusiso warbixin xasaasi aheyd oo aan kasoo qornay dagaalii Hrithik Iyo Kangana.
Waxaa si rasmi ah loo helay qoraalka dacwada Hrithik Roshan uu ka gadbiyay atirishada Kangana Ranaut iyo xidigtan iyadana dawcada Hrithik ay maxkamada kaga gudbisay.
Hadaba Shabakada Filimside oo si gaar ah il ugu heyso qilaafka xoogan ee soo kala dhex galay labadii wax isla qarsan jireen ayaa inoo suura gashay inaan helno si kooban dacwooyinka kala duwan oo ay labadan xidig iska gudbiyeen.
Hrithik Roshan ayaa aad ugu tarax tagay xanaaqa uu Kangana u qaaday wuxuuna dacwadiisa ku xusan in xidigtan maskaxda dhimir ahaan ka jiran tahay!!!
Hadaba 5-ceeb oo aad looga naxay ayay banaanka soo dhigeen Hrithik Roshan iyo Kangana dacwadii kala duwaneyd oo ay iska gudbiyeen:
# In La Is Dhaafsaday Fariimo (Email) Qaab Daran:
Waxaa cadaatay in labadan lamaane ay is dhaafsadeen fariimo (Email) aadu qaab daran kadib markii uu xumaaday xiriirkii ka dhaxeeyay.
Qareenka Hrithik ayaa sheegay in Kangana ay si joogto ah fariimo qaab daran oo lagu caajisiyo xidigan usoo dirto sidoo kalena mudo dheer ay arinkan soo waday dacwadna kusoo oogeen.
Laakiin Kangana iyadana dacwadeeda waxay ku sheegtay in Hrithik Roshan uu hada ka hor siiyay Email-kiisa gaarka ah sidoo kalena ay wada xariiri jireen.
Kangana ayaa ka dhawaajisay in xitaa Hrithik ay fariimo wadaagi jireen asigoo xaasle ah balse ay haatan ceeb ku tahay xiriir dhamaaday inuu waji xumaato u yeelo.
Sidoo kale Kangana ayaa sheegtay in Hrithik uu Email-keeda gaarka ah u dhacay (Hacking) kadibna uu sameeyay inuu dhamaan tir tiray fariimahii ay isku diri jireen si xaaskiisii hore kaga shakinin!
# Hrithik Oo Dacwadiisa Ku Sheegay In Kangana Ay Madaxa Ka Jiran Tahay Ama Dhimirkeeda Taam Ahayn:
Ma sahlano in dacwad sharci ah qof lagu tilmaamo inuu waalan yahay ama dhimirka la’yahay balse Hrithik Roshan oo caadifad weyn qaaday ayaa ku tilmaamay Kangana qof waalan.
Dabcan Hrithik maxkamada waxay ka rabi doontaa inuu keeno cadeymo ah muujinaayo in Kangana madaxa looga jiro!
Kangana ayaa dacwadeeda ku xustay in qof waalan aan xiriir joogto ah lala sameynin, waxayna sheegtay hadii maskaxda looga jiro uu Hrithik Roshan marhore iska xanibi lahaa (Block) fariimaha ay is dhaafsan jireen!!
# Hrithik Oo Kangana Ku Eedeeyay In Aabihiis Ay Dhibaato U Geesatay Arintaana Soo Galisay:
Qareenka Hrithik ayaa maxkamada u gudbiyay qoraal ah in Kangana ay la xariirtay Hrithik aabihiis (Rakesh Roshan) una sheegtay waxa kala dhaxeeyo wiilkiisa.
Sidoo kale dacwada Hrithik waxaa lagu sheegay in Rakesh Roshan uu u jawaab celiyay Kangana una sheegay inay qaldan tahay sidoo kalena wiilkiisa uusan xiiso u qabin!
Laakiin Kangana iyadana dacwadeeda waxay ku sheegtay inay Hrithik aabihiis u dacwootay kadib markii uu dhibaato gaar ah u geestay sidoo kalena guurkiisa fashilkii ku yimid uu iyadana u saarin rabay.
# Kangana Oo Shaaca Ka Qaaday In Hrithik Roshan Kulamo Gaar Ah Ugu Yeeri Jiray:
Inkastoo qareenka Hrithik maxkamada u sheegay in Kangana ay ahayd qofka ay ka nasan waayeen sidoo kalena dhibaatada joogtada ah ku heesay.
Hadana Kangana maxkamada waxay u gudbisay qoraal ay ku sheegeyso Hrithik asigoo xaasle ah inuu kulamo qaas ah ugu yeeri jiray kaligeed.
Mararka qaarna uu xidigan shaqada ka dhaxeyn jirtay kaga faa’iideesan jiray inay u badalaan mid xiriir ku dhisan!!
# Kangana Oo Digniintii Ugu Dambeesay Hrithik U Dirtay:
Kangana ayaa qoraalkeedii ugu dambeeyay ee dacwada ahaa u dhigtay hab digniin oo ay Hrithik Roshan u direyso waxayna tiri “Hadii isaga (Hrithik) uu joojin waayo wareejinta ama faafinta fariimaheyga ama sawiradeyda iyo dhamaan wax walbo ee uu iga hayo oo aan si wanaagsan ku dheehan u siiyay waxaan xaq u lahaan doonaa inaan maxkamad sare ka dacweeyo!”
“Tilaabooyinkaas hadii uu joojin waayo si adag ayaan uga jawaab celin doonaa, weliba fal dambiyeed (Criminal Action) ayaan ka gudbin doonaa taasi oo dhibaato badan kaga imaan karto”
Gabo Gabo Iyo Gunaanad:
Hrithik Roshan dacwadan mala laaban doonaa, mise isaga iyo Kangana meel xun ayay isla tagi doonaan?
Waayo haatan labadan xidig sharafkoodii dhulka ayay la galeen hadii aysan joojin dacwadaan foosha xun sumcada ay Bollywood-ka ku leeyihiin ayaa gabi ahaanba bur buri doonto!
Hadaba Aqriste fikirkaaga ka dhiibo arintaan qaraarka badan sidee kula tahay